lehilahy avy any ETAZONIA Mampiaraka ao amin'ny UNITED STATES
lehilahy avy any ETAZONIA Mampiaraka ao amin’ny UNITED STATES
Posted on 24.08.2020, 13:46 By Goodsite
Tsy mendrika ny ho lazaina indray fa an’arivony ny Breziliana dia mitady ho Amerikana iray izay manambady ny Amerikana mandeha any ETAZONIA. Ary izany dia tsy hoe fotsiny noho ny tsara ny toe-piainana ao amin’ny UNITED STATES. Ny hevitra dia ny hoe American olona manana ny isan’ny toetra izay hahatonga azy ireo ho tena enviable mpankafy. Raha ny marina, ny Amerikana no tena tsara, azo antoka, sy ny tompon’andraikitra.
Eo amin’ny fifandraisana, izy ireo no tena namana, mitsiky foana. American ny lehilahy no tena mavitrika, vonona ho be asa. Tao an-tsekoly, ny ambolena assertiveness, ny fahaiza-hevitra ho amin’ny tanjona sy ny hanatrarana azy. Koa, hajaina American fianakaviany ny lehilahy, tsara vady sy raim-pianakaviana. Amin’ny sehatra iraisam-pirenena Mampiaraka toerana, dia hahita ny maro ny mombamomba ny Amerikana ny olona. Izany dia noho ny zava-misy fa Avaratra Amerikana matetika no mandoa ny saina bebe kokoa ny asa fitomboana mba hamorona ny fianakaviana sy ny tokantrano, izay ifotony hafa noho ireo ao Brezila. Amin’io lafiny io, dia misy ny vintana fa isaky ny vehivavy Breziliana, dia hihaona sy hanambady fast-mitombo Amerikana.
Ny Etazonia (USA) dia firenena any Amerika Avaratra
Amin’ny faritra (an-tapitrisany kilaometatra), ary koa amin’ny vahoaka (olona an-tapitrisany) ao ny Etazonia dia mandray ny toerany eo amin’izao tontolo izao. Ny renivohitry ny firenena dia ny tanànan’i Washington. Ny Etazonia sisin-tany Kanada ary ny Meksika, ary koa ny an-Dranomasina tany amin’ny sisintany Brezila. Lambit United ny Pasifika, Atlantika sy ny any amin’ny tendrontany Avaratra ranomasina. Ny ETAZONIA dia ny tanin ‘ny fahalehibeazany, sy ny habetsahan’ ity firenena ity dia hita amin’ny zava-drehetra avy amin’ny ankamaroan’ireo firenena ao amin’ny faritra, ny majestic hadilanana sy ny tranobeny, vita, ny zavatra rehetra izay voakasiky ny tanana ny Amerikana. Izany ihany koa ny firenena iray amin’ny lehibe ny fahasamihafana: isan-karazany ny vondrona ara-poko, ny fivavahana, ny kolontsaina sy ny tontolom
← I brezila-vavahadin-tserasera Breziliana
Mahazo ny mahafantatra ny finday any Portiogaly. Fivoriana ho an'ny olon-dehibe. Tsy misy fisoratana anarana. Tena sary →
© 2020 Ny Lahatsary Amin'ny Chat Meksika